I-china Fithem ks-020 i-bluetooth wireless earphone boss boat abakhiqizi bezemidlalo ezokungcebeleka nabaphakeli | Kaiwansi
Isikebhe se-Fithem ks-020 bluetooth wireless earphone boss head Leisure sports headphones
Ingxenye yentambo elenga entweni eyenziwe ngo-silicone ithambile kakhulu, futhi ibhethri elikabili lingakhuphula isikhathi sokusebenzisa.
Le ks-020 yakhiwe nge-bk: 3200 chip, futhi inguqulo ye-Bluetooth ingu-5.0. Ibanga elingangeni manzi i-IPx5.
1. Ukwethulwa komkhiqizo:
Le ks-020 yakhiwe nge-bk: 3200 chip, futhi inguqulo ye-Bluetooth ingu-5.0. Ibanga elingangeni manzi i-IPx5. Singabantu be-OEM yesikebhe.
2. Isingeniso sepharamitha yomkhiqizo we-Fithem
I-Chipset BK 3566
3. Izici zemikhiqizo yeFithem
Izindlebe ezincanyana, eziphathekayo nezikahle ezinomsebenzi kazibuthe Ngeke ibhajwe njengezitayela zehedfoni yendabuko.
4. Imininingwane yomkhiqizo weFithem
Amahedfoni ngeke akhubazeke ngenxa yokugoqana ngokungafanele. Kunzima kakhulu, imikhiqizo yethu iqinisekisiwe unyaka owodwa.
5. Isebenzisa inguqulo yakamuva ye-Bluetooth 5.0 yokudlulisa okungenantambo, futhi isekela i-SBC, AAC ne-Aptx esezingeni eliphakeme yokufaka ikhodi. IBHAKHI LOKWAKHA LE-110MAH elishajekayo, elisesimweni sokushaja ngokugcwele, linganikela ngamahora angama-13 omculo odlala ukubekezela. Ukwenza abasebenzisi bakwazi ukuthola ikhwalithi ecacile yezingcingo, kepha futhi nokwanda okukhethekile kokusebenza kwebhande le-vibration neck band, ukuqinisekisa ukuthi ifoni ayiphuthelwa.
6. ISIQINISEKISO SOKULAWULA: cindezela ukwengeza kungashuna umsindo ukucindezela ukunciphisa kwehlisa ithoni, ukhiye ohlanganisa kabili angaqhubekisela phambili ingoma ukhiye ongu-minus ongabuyisela emuva ingoma. Inkinobho yokulawula ephakathi ingasetshenziselwa ukumisa kancane umculo. Isimo se-Middle Control asinamanzi futhi ngeke sithintwe yisimo sezulu, noma ngokubukeka noma ukusebenza komsindo empeleni ngeke kudlulise umuzwa omuhle kakhulu, kepha indima yekhwalithi yomsindo yinhle kakhulu.
7. Intengo nayo ishibhile kunentengo efanayo, isilinganiso sentengo yokusebenza kwekhanda eliphezulu siphezulu futhi singcono. Umkhiqizo futhi unentengiso nama-oda kusiza samazwe omhlaba se-ALIBABA, Gxila engxenyeni edingeka kakhulu yomsebenzisi, ukuze ekubukekeni, ekugqokeni, ekushayweni, nakwikhwalithi yomsindo ingakwazi ukukhetha ibhodi elifushane elisobala, ibe yimakethe futhi izimpahla zabagibeli ezincintisana kakhulu.
Langaphambilini I-Fithem ks-016 i-wireless stereo neckband bluetooth Chip 5.0 headphone yezemidlalo
Olandelayo: I-Fithem Ks-816 engenantambo ye-bluetooth tws headset engaphansi kwe-treble ingenziwa ilogo eyenziwe ngokwezifiso
I-Fithem ks-011b yomculo ongenamanzi i-blueto engenantambo ...